Mobile Terminal အကြောင်း — MYSTERY ZILLION
Mobile Terminal အကြောင်း
ဒီခေါင်းစဉ် နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မေးမြန်း ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။
yes bro, plz continue n i'll follow up
first default root password is "alpine" without quote is it ?
n we should change it n below isalink which demonstrate how to change it..
My root password already changed and fix hole. I am finding the SBSettings app, to haveaquick one-tap toggle on/off for SSH and other key services.
Anyone know use terminal to sent sms to other phone or lock phone or unlock phone without touch the phone?
Ei day, i think after u install openssh in cydia there the ssh toggle setting should appear @ sbsetting panel...by da way ve no idea on how to sent SMS n control other phone via terminal ..:(
i got it . >_ . ssh ကိုဖွင့် ပြီး ဘာတွေ ဆက်လုပ်လို့ရသေးသလဲ
ဒီနေ့ saturngod.net မှာ ornagai in iphone ဆိုတာကို ဖတ်ဖြစ်ပြီးတော့ လုပ်ကြည့်တာပါ။
IPA ကို download အဲဒါကို winscp နဲ့ \_private\_var\_mobile\_Library\_ အထိရောက်ပါတယ်။DOWNLOADS FOLDER မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ FOLDERအသစ်ဆောက်ပေးပြီး တင်ပါတယ်. Installous ကို ဝင်ပြီး Download ကနေ မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ
Put it on below location bro..
By the way slash / and backslash \_ are different bro..
ဒီလမ်းကြောင်း နဲ့ကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကိုစေတန်က ညဏ်စမ်းပုဒ်စာ လုပ်ထားတာကို။
start the Terminal, တားမြစ်နယ် ရဲ့ အခြေခံ command prompt commands များကို လေ့လာကြည့်ပါ။ ဝင်းဒိုထဲက command prompt နဲ့ ဆင်တူသလိုပါပဲ။
၁. cd ဖိုဒါ ပြောင်းချင်ရင် သုံးတဲ့ ကောင်မန်း
၂. cd ~ root ကို ပြန်သွားတဲ့ ကောင်မန်း
၃. cd / root ကို ပြန်သွားတဲ့ ကောင်မန်း
၄. cd .. အပေါ်ဖိုးဒါ ကို ပြန်ထွက်တဲ့ ကောင်မန်း
၅. mkdir ဖိုဒါ အသစ်ဆောက်တဲ့ ကောင်မန်း
၆. ls ဖိုဒါ အောက်ကရှိတဲ့ ဖိုဒါတွေကို ဖော်ပြပေးတဲ့ ကောင်မန်း